Khurafaadkii Greega “Greek Mythology” - Land Of Punt
Gayiga looyaqaan waqooyiga hoose ee Yurub (Greece); intaan cilmi samaawigu soo gaadhin waxaa laga aminsanaa in ilaahyo badani ay jiraan kuwaa soo dunida maamula. Giriiga waxaa laga lacaabudi jiray 12 asnaab oo loo yaqaanay Olomboyiinta“The Olympians”. 12 ilaah degenayeen oo loogu magacdaray buur layidhaah “Mount Olympus”. Asnaabtan Olombos dunida la baray ee sheeko caruureedka iyo khuraafad laga sameeyey waxay kakoobnayeen lab, dhadig iyo dhalaankooda. 12 ilaah, midkasta wuxuu lahaa sifo ugaar ah iyo awood aan lala wadaagin sida ilaaha bada kasoo uqaabilsan biyaha dhulka iyo la macaamilkooda. Zeus wuxu ahaa gudoomiyaha wuxuuna awood ulahaa inuu maamulo danabka. Minerva waxay qaabilsan tahay dagaalka iwm. Giriigi hore markay ilaah kasta wuxuu awooda uleeyahay ay ka dalbanjireen. Giriigu asnaabta iskuma lisi jirin oo muranka siyaasaded way ka ilaalinjireen midkasta halkiisa ayaa lagu xurmaynjiray.
Dhanka kale, diimaha asalkoodu kasoo jeedan khuraafad iyo sheeko Ibliis hadii aynu ku shabahno asnaabta giriigu ilaahyada uyaqaanen; Zeus wuxuu udhigmaa oo bartiisi kujira Baal, Osiris, Brahma, Odin. Dhinaca ilaahayda muruqyada iyo inamada ilaahyada yaryar ah waxay kala ahaayen Poseidon, Apollo oo udhigmaa Tammuz, Horus, Vishnu iyo Thor. Boqorada Zeus xukunka lahaysata waa Aphrodite waxayna udhigmay Venus, Shiva, Ishtar, Atargatis, Friyya. Waxaad arkay in wakhtiyadii ka horeeyey giriiga ilaa fircooniyiinti iyo baabilon inay nadaamka ilaahyada ay isgaga midyihiin oo sadex ilaah oo isdhalay awood guud ka dhaxayso.
Zeus – Sanabka guud, kana awood badan intakale
Aphrodite – Sanab “dhadig”, qurux iyo dumarnimo
Apollo – Dagaal yahan dagaalada guul kasoo hooya
Europa – Waa inan qurux badan oo Zeus latagay.
Amazon – Dagaal yahanad wakhtigii Greega.
Argus (Argos) – Bahal indhobdan oo ay uyaqaanen ilaah xaasidnimada.
Ajax – dagaal yahan guul weyn kasoo hooyey dagaalkii “Trojan War” oo siwan u tirtiray cadowga.
Helios – waxay ka aminsanaayen inuu yahay ilaah fardo-fuulka samada wuu ka muuqanjiray cirka wakhtiyada baalo xaaftanka dagaalka isaga iyo fardihiisuba. Shirkado badan baa magaciisa qaata sida Helios Software , Helios Music & Helios Heater.
greek mythology ilaahyada giriiga Iluminaatiga Ilumunati khuraafadka giriiga maysooniyada ururada hadafka qarsoon leh